Kenya oo sheegtey dardargelinaysa danaha Afrika ee madasha UN-ka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo sheegtey dardargelinaysa danaha Afrika ee madasha UN-ka
Kenya waxay sheegtay inay u adeegsan doonto mowqifkeeda Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay ku riixdo fikradaha faa iidada u leh Afrika.
Laakiin khubarada qaar ayaa sheegaya in ay tahay in ay soo jeediso dib u habeyn lagu sameeyo qeybta ugu awooda badan Qaramada Midoobay.
Jimcihii, Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Raychelle Omamo ayaa sheegtay in Kenya ay dib ugu laabanayso Golaha 23 sano kadib, iyada oo ay jiraan arrimo badan oo cusub oo adduunka saamayn ku leh. Laakiin waxay tilmaamtay in Kenya ay mudnaanta siin doonto arrimaha quseeya Afrika.
“Waxaan indhaha ku hayn doonaa Afrika oo ay ka mid yihiin xaaladda Soomaaliya, Darfur, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Harooyinka Waaweyn, Sahel iyo gobollada kale ee qaaradda oo u baahan fiiro gaar ah,” ayay u sheegtay weriyeyaasha Nairobi shalay.
Aagagga ay sheegtay waa qaar ka mid ah aagagga ugu firfircoon ee colaadaha qaaradda Afrika, kuwaas oo horay u ahaa mowduuca xallinta goluhu.
“Kenya waxay heli doontaa fursad ay ku qaabeyso ajendaha caalamiga ayna hubiso in danaheena iyo danaha Afrika la maqlo lana tixgeliyo. Waxaan hadda cod ku leenahay mid ka mid ah golayaasha go’aan gaarista ugu muhiimsan, ayay raacisay.
Khamiista, ayay Kenya ku guuleysatay kursi golaha ka dib markii ay ka adkaatay Jabuuti. Guushan ayaa timid ka dib dagaal ba’an oo loogu jiray codadka oo u arkay in codbixintu u gudubtay wareegii labaad. Ugudambeyntii, waddanku wuxuu ku guuleystay 129 cod, kaliya labo ayaa ka badan intii loo baahnaa 127, iyadoo Jabuuti heshay 62.
Kenya waxay sheegtay inay riixi doonto ajandeheeda tobanka qodob ah, liistada aagagga ay mudnaanta siisay muddadii ololuhu socday, intii ay jirtay golaha.
Meelaha mudnaanta la siinayo waxaa ka mid ah la dagaallanka argagixisannimada, caddaaladda iyo xuquuqda aadanaha, dhowrista deegaanka, dib-u-heshiisiinta, xoojinta dhalinyarada iyo haweenka iyo sidoo kale horumar waara. Kuwo kale waa nabad ilaalin, shaqo samafal – oo ay ku jiraan martigelinta qaxootiga- iyo amniga gobolka.
Khabiiro ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ayaa sheegaya in waddanku leeyahay fursad wanaagsan oo uu ku riixo dib-u-habeeynta UN ka golaha gudahiisa.
“Kenya waa inay sii wadaa kaalinteeda dib-u-habeynta iyo ballaarinta UNSC maxaa yeelay ajandahaan ayaa ah danta ugu wanaagsan Afrika. Waa in ay noqotaa geesinimo oo cod weyn ku muujisaa codadka Afrika isla markaana aan loo ogolaan in tartan xoog badan uu ku carqaladeeyo danaha guud ee dalalka Afrika, ”Dr Cliff Mboya, oo khabiir u ah xiriirka Shiinaha iyo Afrika, ayaa u sheegay The Nation.
Kenya waxay horey qayb uga ahayd guddiga midowga afrika ee dib u habeynta UNta taas oo qaarada ay ku dooday liis ballaarin xubnaha joogtada ah ee golaha si loogu daro ugu yaraan hal qof oo ka socda qaarada Afrika.
Goluhu wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood laakiin keliya shan ayaa joogta ah oo leh awood diidmo. Waxay kala yihiin Faransiiska, Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka. Shanta waxay heleen mudnaantaas dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxaana loo xushay iyada oo lagu saleynayo tirada dadka ay ku nool yihiin iyo awooddooda dhaqaale waqtigaas. Si kastaba ha noqotee, sifooyinkaasi hadda ma aha oo kaliya ilaalinta shanta.
Midowga Afrika wuxuu ku dooday in qaaradda ay ka hesho inta badan go’aannada ka soo baxa golaha, laakiin malaha xubin rasmi ah.
Waxay intaas ku dartay in muranka xubnaha joogtada ahi uu badanaa dib u dhigo ama carqaladeeyo xallinta dhibaatooyinka waaweyn ee adduunka.
Wadamada qaarkood sida Hindiya (oo loo doortey inay weheliyaan Kenya asbuucan) iyo Jarmalka (oo laga bixi doono bisha Diseembar markay dhammaystaan ​​muddadooda) ayaa si isku mid ah ugu yeeray dib-u-habeyn.
Mboya wuxuu yiri “Kenya waa inay xasuusnaataa in tani aysan ahayn guushii Kenya laakiin ay mas’uuliyad iska saarantahay sidii ay u matali lahayd danaha guud ee qaaradda, kala qeybsanaanta ayaa jirta,” “Falalkeeda waa inay dhiiri geliyaan aaminaada iyo kalsoonida AU. Howsha ugu horeysa waa inay noqotaa sidii ay ula xiriiri laheyd Jabuuti iyo Midowga Afrika si loo hubiyo inay hesho kaalmadooda inta ay ka taagantahay UNSC.
Wuxuu intaas raaciyay: “Wadashaqeynta gobolka waa in ay noqotaa mid ku saleysan ajendaha loogu tala galay Kenya horayna loogu socodsiiyay qaabkii codbixinta ee xulafadeeda gobolka sida Ethiopia, Sudan, Somalia. Midowga Afrika waa in uu dejiyaa borotokool cusub si loo hubiyo in noocaan oo kale ah uusan mustaqbalka dhicin. ”
Previous articleku Dadaal faytamiin Cga si aad uga hor Tagtid cuduro badan
Next articleMasar waxay ugu baaqday Qaramada Midoobay inay soo faragaliso ka dib markii ay xannibmeen wadahadalada biyo xireenka Niil
Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya iyo maamul gobaleedyada oo ku shiraya...